September 27, 2021 – သုတရသ
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ဒူးနာ ဝေဒနာရှင်များအတွက် ကျွန်တော် ပျောက်ကင်းခဲ့ တဲ့ ဆေးနည်းလေးပါခင်ဗျ။ ငွေလဲ မကုန် ဝေဒနာလဲ အမြန်ပျောက်ပါတယ်။ စေတနာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ရမှာကတော့ – ယဲယိုရွက် ခူးပြီးနာနေတဲ့ ဒူးခေါင်းပေါ်ထားပြီး ဒူးအစွတ်နဲ့…
Zawgyi ဖန်ခွက်ထဲကိုအုန်းစိမ်းရည်ထည့်၊ပြီးရင်ကျောက်ဖရုံယိုတစ်တောင့်ထည့်စိမ်ထားလိုက်၊တစ်နာရီကျော်လောက်စိမ်ထားရင်ရပြီ၊အရည်လည်းသောက်အဖတ်လည်းစား၊အဲဒါဟာကျောက်ကပ်အတွက်ထာဝရဆေးပြဲဖစ်ပါတယ်။ကျောက်ကပ်အမြဲတန်းကောင်းချင်ရင်တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်သောက်ပေး။ကျောက်ကပ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်မပျက်ပါနဲ့၊အခုပြောတဲ့ကျောက်ကပ်အတွက်ထာဝရဆေးကိုတစ်ပတ်၃ကြိမ်စားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ဟာအသက်၄၀ကျော်ပြီဆိုရင်အိုဟောင်းသွားတော့တာပါပဲ။ကျောက်ကပ်အလုပ်လုပ်မှုဟာအသက်၄၀ပြည့်တဲ့နှစ်ကစလို့၁နှစ်ကို1ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကျောက်ကပ်လည်းအားနည်းလာတော့တယ်။သို့သော်လည်းသူ့ကိုသေချာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တတ်ရင်တော့အကောင်းအတိုင်းရှိနေပြီးလုပ်ဆောင်ချက်တွေမကျဆင်းနိုင်ဘူး။ ကျောက်ဖရုံသီးကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးရေဖြစ်တဲ့အုန်းစိမ်းရည်ထဲထည့်စိမ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျောက်ကပ်အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။ယ္ခုအခါမှာကျောက်ကပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေအများကြီးဖြစ်နေကြပါတယ်။ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း၊ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း၊ကျောက်ကပ်အားနည်းခြင်း၊လုပ်ဆောင်ချက်ကျဆင်းခြင်း၊ဆီးအမြှုပ်များခြင်း၊ဆီးဆိပ်များခြင်း၊၊ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ကျောက်ကပ်ကင်ဆာစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့သူတွေကြည့်လိုက်ရင်မိန်းမထက်ယောက်ကျားကပိုများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယောက်ကျားမှာဆီး-မိန်းမမှာမီးတဲ့။ယောက်ကျားတွေဆီးမကောင်းရင်ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြစ်လွယ်တယ်။ယောက်ကျားတွေကပေလည်းပေကြတာကိုး။ဒါကြောင့်လည်းယောက်ကျားတွေအသက်တိုကြတာဖြစ်တယ်။အသက်ကြီးသည်အထိကျောက်ကပ်ကောင်းကြတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရင်သူတို့ဟာအစားအသောက်ကိုသင့်ရုံလောက်ပဲစားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ကျောက် ကပ် ဟာစားသမျှအစားအသောက်တွေထဲကပါလာတဲ့အညစ်အကျေးအဆိပ်အတောက်တွေကိုသန့်စင်ပေးပြီးဆီးလမ်းကြောင်းကနေစွန့်ထုတ်ပေးရတဲ့အင်္ဂါဖြစ်ပါတယ်။သင့်ရုံသာစားရင်ကျောက်ကပ်ကအလုပ်နဲနဲပဲအလုပ်လုပ်ရလို့မပင်ပန်းဘဲကြာရှည်ခံမယ်။အစားကြူးရင်တော့ကျောက်ကပ်ကပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ရလို့ကြာရှည်မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ပြဲဖစ်ပါတယ်။အဲဒီအပြင်အခြားသောဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဘာတွေလည်းဆိုရင်…ထုံးဓာတ်များတဲ့ရေကိုရှောင်ခြင်း ၊အက်စစ်ဓာတ်များတဲ့အစားအသောက်ကိုလျှော့စားခြင်း ၊အယ်ကာလီများတဲ့အစားအသောက်ကိုပိုစားခြင်းအသီးအရွက်မစားတဲ့အကျင့်ကိုပြုပြင်ခြင်း ၊အနီရောင်အသားကိုသင့်ရုံသာစားခြင်း ၊အသားထက်အဆီကနေကယ်လိုရီပိုရယူခြင်း၊ ဝမ်းမချုပ်အောင်လေ့ကျင့်ခြင်း ၊ချွေးထွက်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ သွားနှင့်ခံတွင်းကိုအမြဲသန့်ရှင်းနေစေခြင်း ၊ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများစေခြင်း၊ည၁၀နာရီအိပ်ယာဝင်ခြင်း ၊အရက်သေစာမူးယစ်ဆေးဝါးရှောင်ရှားခြင်း ၊အနားယူပေးခြင်း…
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ တန်ဖိုးကြီး အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ ဝယ်ပြီး အမြဲမမှီဝဲနိုင်သူတွေ အတွက်ပါ။ခရေပင်က ခရေရွက် လက်တစ်ဆုပ်ပြုပ် ။ နံနက်စာစားပြီး ရေနွေးကြမ်း တစ်ခွက်စာ ။ညနေစာစားပြီး တစ်ခွက်သောက်ရင် ဆီးချိုကို ထိန်းနိုင်တယ် ပြောပါတယ်။ ကုသိုလ်တော်ဘုရားဝင်းမှာ ဝေယျာဝစ္စလုပ်နေတဲ့…
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ကျနော် အားကစားလုပ်ရင်း ခါးနာတဲ့ ဒဏ်ရာကို ရခဲ့ပါတယ်။ လိမ်းဆေးမျိုးစုံလိမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။ အနှိပ်သည်များနဲ့လည်း ကုသခဲ့ပါတယ်။ မပျေက်သေးလို့ အဘကြီးတစ်ယောက်က သူသိထားတဲ့ ဆေးနည်းကို စမ်းကြည့်ဖို့ ပြောလာတာနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ တကယ်လက်တွေ့ပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်း ဒူးနာလို့ဒီဆေးနည်းကို…
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ဆေးဖက်ဝင် နတ်ဆေးပင် မဟာကာကြံဆစ် နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်သည် ဟူသောစကားအရ မြန်မာ့ဆေးပင်အစွမ်း အံမခန်း များစွာထဲမှ ဆေးပင်တမျိုးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးရလျှင်မဟာကာ ကြံဆစ်ဟုခေါ်သော နဂါးမြီးရွက် နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ မဟာကာကြံဆစ် ဟုခေါ်သော ထိုဆေးပင်ဧ။်…
“၃လ ၆လသာ ခံမယျဆိုတဲ့ ကငျဆာရောဂါတှကေို အမွဈပွတျစတေဲ့ ဆေးနညျးကွီးပါ”
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ၃လ ၆လသာ ခံမယ်ဆိုတဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေကို အမြစ်ပြတ်စေတဲ့ ဆေးနည်းကြီးပါ အ သက်ရှည်ခြင်းဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ…ကျန်းမာခြင်းဟာလည်း လာဘ်တစ်ပါးပါပဲ…ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ရောဂါတွေဟာ ကြောက်စရာကောင်းလှအောင် များပြားလာတာပါ….. ဒီအထဲမှာ B ပိုးတွေ C ပိုးတွေ…
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ဆံပင်ဖြူခြင်းဟာ လူငယ်တော်တော်များများမှာ တွေ့လာရတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အသက် (၄၀)ကျော်မှသာ ဆံပင်ဖြူကြပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ အသက်(၂၀)ကျော်နဲ့ ဆံပင်ဖြူလာသူတွေ တွေ့လာရပြီ။အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူတာကို premature grey hair လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမှန်တော့…
“ခြိုငျး(ဂြိုငျး)မဲနလေို့ စိတျညဈနတေဲ့ ပြိုမတှေအေတှကျ”
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ဒီနေ့မှာတော့ ချိုင်း(ဂျိုင်း)မဲနေလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် ဆေးနည်းစွမ်းကောင်းလေးတစ်ခုကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ အာလူး အာလူးမှာ အသားအရေကို အရောင်ချွတ်ပေးနိုင်တဲ့ အက်ဆစ်ပျော့တစ်မျိုးပါ။ အာလူးတွေကိုသာ ပါးပါးလှီးပြီး ကပ်ထားပေးလိုက်ရင် ချိုင်းတွေဖြူလာမှာပါ (သို့) အာလူးကိုကြိတ်ပြီး…
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ရှားစောင်းလက်ပက်ဆိုတာကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက်ရော အလှအပအတွက်ပါ အသုံးဝင်ရုံမက အိမ်မှာစိုက်ပျိုးထားရင်လည်း မျက်စိပသာဒ အေးပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပက်မှာ Antioxidant (ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း) တွေပါဝင်လို့ အရွယ်တင်နုပျိုစေသလို ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေလို့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေဝင်ရောက်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝက်ခြံ၊ အသားအရေခြောက်တာ…
“သင်ျဘောပငျစိုကျတဲ့အခါ အမ ပငျပဲ ဖွဈလာစမေယျ့ နညျးလမျးကောငျးလေး”
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ သင်္ဘောပင် စိုက်တဲ့အခါ အမ ပင်ပဲ ဖြစ်လာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေး ပထမ အဆင့် 1. အသီး၏အောက်ပိုင်းအခြမ်းမှ အစေ့များကိုယူပါ။ ဒုတိယအဆင့် 2. အစေ့များကိုရေစိမ်၍ ရေပေါ် ပေါ်လာသောအစေ့များကိုဖယ်ပါ။ ရေပေါ် ပေါ်သော…